Ngubani osebenzisa iTwitter? | Martech Zone
Ngubani osebenzisa iTwitter?
NgoLwesibini, Meyi 12, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Namhlanje bendiyi-panelist kwiZiko lokukhula kweShishini kwi-Indianapolis Chamber of Commerce. Isihlwele sasizibandakanye kakhulu, kangangokuba iiyure ezi-2 zokuchaza ukuthengisa kunye nentengiso ye-Intanethi yayiyeyolunya.
USusan Matthews waseBorshoff (a uphawu lokukhangela kunye nentengiso kwi-midwest) kwaye ndiza kulandelela ukubona ukuba asinako ukubeka ndawonye umasifundisane ukuze siqhubeke nokuzibandakanya kwaye siphendule ngokupheleleyo kuzo zonke izicelo.
Njengazo zonke iingxoxo zentengiso kunye nemithombo yeendaba zentlalo, incoko yafumana umkhondo osecaleni Twitter. Ndibuze le mibuzo ilandelayo:
Bangaphi abantu abasebenzisa i-Twitter kwishishini labo? Izandla ezimbalwa.
Bangaphi abantu abazi ukuba yintoni iTwitter? Izandla ezimbalwa.
Bangaphi abantu abazi ukuba yintoni i-Twitter kodwa baneentloni ukuyamkela? Uninzi luhleka kakhulu.
Okwangoku, abantu abambalwa bagqabaza ngokuqala nje ukusebenzisa i-Twitter. Into eyalandelayo yayiyinto entle enomdla ngabantu kumthamo wengxolo ku-Twitter kuthelekiswa nolwazi oluncedo. Ndiyavuma… kwaye yaphefumlela le tshathi ilandelayo yokwahlulwa kwabasebenzisi be-Twitter:
Phawula: Ukuba ungathanda ukucela umngeni kukuchaneka kwala manani, nceda ufunde eyam lwemibandela.
Ukuba ndisebenzise i-Twitter kule minyaka imbalwa idlulileyo, ndiyayixabisa indawo yokufumana ulwazi endinokulufumana. Ndiyacinga I-Twitter inokusetyenziselwa ukuvelisa amashishini ngokunjalo -Kodwa i umthamo wengxolo uya usiba namandla.
Umntu omtsha ku-Twitter, i ingxolo unokuba yisithulu. Mhlawumbi yiloo nto uNielsen echonge izinto ezininzi ezintsha Abasebenzisi be-Twitter bayishiya inkonzo kungekudala. Ekuqaleni, abanye babecinga ukuba abasebenzisi bayayishiya iwebhu kwaye bayokufaka izicelo, kodwa uNielsen sele ehlaziye izibalo zabo kwaye wangqina ukuba ukugcinwa kwabasebenzisi abatsha kusengumba omkhulu.
tags: Itekhnoloji yeNtengiso yeRekhodiSocial Media Marketing
Ishishini leeNethiwekhi zeNtlalo
Meyi 13, 2009 kwi-7: 15 AM
I-Twitter iyakhula e-Australia ngezinga elimangalisayo, kwaye sixoxe ngokufunyanwa kweNielsen kutshanje.
Ixesha liyakundingqina ndingalunganga okanye kungenjalo ……… Nangona kunjalo ndiva ukuba i-one-off okanye ke abasebenzisi 'bayinto yokudlala' abathathi-nxaxheba beMithombo yeendaba, abalunge ngakumbi kwiNdawo yam, kuFacebook, njl.
Umdibaniso we-Linked In Twitterers usinika amathemba angaphezulu …………… .. aphethwe ngobungcali.
I-BTW Douglas (ethetha ngeyona ndlela intle) andilifumani igama lakho naphina ngoko ke bendingenalo nofifi lokuba ngubani obhale olu lwazi luchanekileyo noluchanekileyo.
Meyi 14, 2009 kwi-11: 20 PM
Bonke abahlobo bam bangakuhleka xa ungafumani igama lam naphi na… badiniwe ligama lam lokutyatyekwa NDAWONKE. 🙂
Meyi 13, 2009 kwi-7: 23 AM
Ukuba ujonge kakuhle kwindawo yakho Doug …………. kwaye xa ujonga okwesibini kwiphepha lokufika …………. Ngokucacileyo NDIYIMFAMA!
Ndicinga ukuba uyakuxabisa oku: -
Ngaba i-Twitter sisiqalo seWebhu 3.0? http://budurl.com/whpm